Koronto Graphite, Graphite Rod, Dahaarka Foornada Graphite - Hexi
Waxaan taageersanahay falsafada ganacsiga ee tiknoolajiyada hogaamineysa, tayada ugu horeysa iyo macaamiisha marka hore.
Tayada Badeecada Aad ufiican
Hebei Hexi Carbon Co., Ltd. waa shirkad ballaadhan oo hal-joogsi ah oo soosaarta korantada garaafyada. Cinwaankeeda xafiisku wuxuu ku yaal Handan, magaalo qaran oo taariikhi ah iyo dhaqameed ku taal Gobolka Hebei, Shiinaha. Warshadeeda waxay ku taalaa Changxiang Township, Cheng 'Degmo, Magaalada Handan, Gobolka Hebei, Shiinaha. Waxay ku fadhidaa dhul dhan 415,000 mitir murabac ah waxayna leedahay 280 shaqaale.
Faa'iido Ayaa Ku Jirta Korantada Naqshadeynta ...